Manatsarana tanana ny Wordpress 3.6 nefa tsy maty amin'ny fanandramana | Avy amin'ny Linux
Ampivoaro amin'ny fomba mahomby amin'ny WordPress 3.6 nefa tsy maty mandritra ny fanandramana
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fampianarana Wordpress, Tutorials / Manuals / Tips
Fanavaozana avy amin'ny kinova an'ny WordPress amin'ny ambony iray hafa dia tena mora, ka mora fa ity lahatsoratra ity dia ho tena fohy.
Raha ny marina satria ny andiany 2.7 dia tsy ilaina ny manao an'io amin'ny tanana, satria WordPress misy ny rafitra fanavaozana mandeha ho azy izay ho hitanao ao Fitaovana »Fanavaozana ary niova izany tamin'ny kinova 3.0 ho Desktop »Fanavaozana.
Izay mety hanaraka dia vita amin'ny risikao manokana. Aza adino ny manana backup foana ny database sy ny rakitra WordPress-nao
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ny kinova farany an'ny WordPress, raha azo atao amin'ny teny espaniola.
Hesorinay ny folder ary tsy maintsy mandika na manoratra ireo rakitra vaovao fotsiny izahay, ho an'ireo taloha, afa-tsy ilay fisie wp-config.php na zavatra hafa novainay tanana.
Farany, tsy maintsy apetraka ao anaty browser fotsiny isika:
Ary kitiho ny bokotra manao hoe: Hanavao ny angona, na zavatra toa izany. Dia izay!! Vita ny amin'iny!! Manomeza !!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Wordpress » Fampianarana Wordpress » Ampivoaro amin'ny fomba mahomby amin'ny WordPress 3.6 nefa tsy maty mandritra ny fanandramana
3rn3st0 dia hoy izy:
Sooo misaotra! Tsy noheveriko fa tsotra be ny vahaolana ary, ho fanampin'izany, haingana dia haingana ny valin'ny fangatahako.
Mbola averiko ihany ny fisaorana.
Fiarahabana avy any Venezoelà!
Valiny amin'ny 3rn3st0
Tsisy fisaorana. Fahafinaretana manampy !!
Vao avy nanindry ny "Vaovao farany" aho dia izay. * Yao Ming *
Efa nanana backup aho satria BackWPup mandeha ho azy ny famerenana ny bilaogy iray manontolo isan'andro ary tehirizina ao amin'ny Dropbox. 😉
Fantatro izany taloha ela be, fa satria tsy mampiasa fampiantranoana maimaimpoana intsony dia tsy dia ampiasaiko loatra.
Ankehitriny, ny olana dia amin'ny Drupal, satria ho fanavaozana mandeha ho azy dia ampiasaina ny drush, ary ho fanavaozana ny tanana, ny famoronana fampirimana ho toy ny piraofilina fametrahana ary avy eo fanavaozana.
Izay no azonao amin'ny famadihana ny WordPress. 😛
Tsia, tsy inona izany. Ny ankamaroan'ny fotoana dia bibikely 8 io, ka toy ny hoe mametraka ny Arch na Slackware voalohany ianao. Tsy misy zavatra hafa.
Oh, teny an-dalana, ho avy ny Drupal 8, ary hitohy ho KISS amin'ny resaka fitantanana BD sy miaraka amin'ny rafitra mahazatra.
Mikasika ny WordPress, nijanona aho satria tsy namela ahy hametraka forum mendrika (tsy tiako ny BBPress raha ny fahitako azy, ka tiako ny maodelin'ny forum mandroso an'i Drupal).
Drupal sy Joomla: samy mankahala azy ireo amin'ny tenako manontolo aho.
Holy Dio! Dory izany ary atsipazo ao anaty renirano !! Aza miteny amiko fa aleonao WP toy izay Drupal? Ho an'i Jommla toy ny manosotra azy amin'ny fidiovana ianao, ary misintona rojo vy tsy ho ela dia milomano!
Misafidy aho, miala amin'ny lozisialy aho ary aleoko arivo heny ny WordPress noho ny Drupal.
+ Iray miliara ho an'ireo hevitra roa nataonao. 😀
Raha misy forum UNIFIED, bilaogy ary serivisy hafa dia mamporisika anao hampiasa Drupal aho. Izany no antony nisafidianako an'io CMS io.
Joomla! Tsy tiako tsy misy antony izany. Niova avy any Guatemala mankany Guatemala izy io, ka nanapa-kevitra ny hampiasa ny Drupal aho fa tsy ny Joomla.
Miaraka amin'ny wordpress.com aho ka tsy mila manao an'izany aho hehehehe
Ao amin'ny wordpress.com aho ka tsy mila manao na inona na inona: trollface:
Ary tsy mamela anao hanao saika zavatra rehetra koa. 😛
Eny, tsy ny olon-drehetra no afaka manana mpizara azy manokana 🙁
Nanomboka tamin'ny fampiantranoana maimaimpoana ho zanaky ny reniny avy amin'ny 0.00 Webhost aho.
shini kire dia hoy izy:
ooohhh mampiantrano xD ny fampiantranoana
Fa andramo atao izany amin'ny fampiantranoana alarobia maimaim-poana (0.00 Webhost) ary maharitra mandrakizay izany. Ka nampiasa ny fomba fampianarana aho ary nahafinaritra ny zava-drehetra, tsy nila nanao backup intsony aho ary mbola nijoro ihany ny bilaogiko (nosakanany aho satria tsy mazava loatra ny fepetra sy ny fepetra arahin'izy ireo ary nampidina ahy ny admin).
Snif… andao hampiasa linux…. fofona ... haha!
Ary avy eo "nano troll ianao" Hitan? Izaho ilay tsara
Farafaharatsiny kalitao ireo troll. Soa ihany fa ny Akismet dia nanana fahatsapana fihazana troll saro-kenatra.
Hahaha, ny zavatra ratsy indrindra dia ny tsy fanaovana trolling. Matotra io, tsy azoko. : S
ROFLMAO !!! Ianao nanao ny androko tamin'ity fanehoan-kevitra ity.
Hafa miaraka amin'ny wordpress.com eto.
juancvas dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara, saingy tiako ho fantatra hoe iza avy ireo rakitra manavao ny wordpress rehefa vita ho azy izany, satria te-hanova ny tanana sasany aho fa tsy haiko raha very asa aho rehefa manavao
Mamaly an'i juancvas
Sekoly Ambony NLP dia hoy izy:
Misaotra, namonjy ahy nijaly nandritra ny ora vitsivitsy ianao ary nibontsina kely teo amin'ny handriko tamin'ny latabatra 😀
Valio amin'i Escuela Superior de NLP
Calligra 2.7 misy amin'ny fanovana interface
MySQL mankany Maria DB: Torolàlana momba ny fifindra-monina haingana ho an'i Debian